अन्यौलमा हुनुहुन्छ ? यो सेयर किन्नेले पाउनुहुनेछ २५% लाभाँश वा ४०% हकप्रद भर्ने अवसर ! पढ्नुहोस् — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अन्य > अन्यौलमा हुनुहुन्छ ? यो सेयर किन्नेले पाउनुहुनेछ २५% लाभाँश वा ४०% हकप्रद भर्ने अवसर ! पढ्नुहोस्
अन्यौलमा हुनुहुन्छ ? यो सेयर किन्नेले पाउनुहुनेछ २५% लाभाँश वा ४०% हकप्रद भर्ने अवसर ! पढ्नुहोस्
काठमाडौ । चिलिमे हाइड्रोपावरले १५ प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीको पछिल्लो ३३७ औं सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय अनुसार लाभांश दिने प्रस्ताव अब हुने २१ औं वार्षिक साधारण सभामा पेस गरिने बताईएको छ ।
१५ प्रतिशत बोनस वितरणपछि चिलिमेको चुक्तापुँजी तीन अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।
कम्पनीले कार्तिक २४ गते २१औं वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनार्थ असोज २७ देखि कार्तिक २४ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने भएको छ। यदि चिलिमेको लाभाँश प्राप्त गर्ने हो भने अजसम्ममा सेयर किनिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिंङ एन्ड फाइनान्सले ४० प्रतिशत हकप्रद बिक्री गर्न असोज २७ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । यसआधारमा, हकप्रद दाबी गर्न बुक क्लोज हुनु भन्दा अघि फाइनान्सको सेयरधनी बनिसक्नुपर्नेछ ।
धितोपत्र बोर्डले हालैमात्र गुहेश्वरीलाई १०ः४ अनुपातमा १०० रुपैंया अंकित १९ लाख ७३ हजार ९२८.७७ कित्ता अर्थात् १९ करोड ७३ लाख रुपैंया बराबरको हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने अनुमति दिएको हो । यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम एनआइबीएल क्यापिटलले गर्नेछ ।
प्रकाशित मितिः २०७४ असोज २६
क–कसले भर्न पाउँछन् आजबाट खुलेको बैंकको १०० रुपैंया अंकित २६ करोडभन्दा बढिको सेयर ?
प्राईम बैंकको १ करोड साढे २३ लाख सेयर खुल्यो, असोज १६ सम्म म्याद !
बेहाल शाैचालयबाटै महानगरकाे ९० लाख कमाइ